"Ukudla kwasekuseni indawo" (Lure): izici. Baubles ebusika Swedish induna
umdlalo laso eliyingqayizivele "Isidlo sasekuseni indawo" (Lure) owuthanda futhi ikhanga elambile ezidla inyama. Lodumo Spoons kusukela Bay de Noc inkampani wathola kuqala kwekhulu lamashumi amabili. On amanzi Russian ebabonisa abanye okukhulu ekubambeni zezinhlobo indondo, ezifana Pike, salmon, iphezulu. Ngezinye izikhathi ngisho ukubamba whitefish ngokuphepha. Anglers upscale European ushayele le lolo kangcono bengena ezingosini zayo ebusika iphezulu.
Mayelana Bay De Noc
Eminyakeni engaphezu kwengu-50, inkampani American ukhiqiza izinga okusezingeni zokudoba ukuthi kukhona omkhulu wokwakha wathola ukwethenjwa kokubili e-US nase-Europe. Abantu Abadala Abavuthiwe indlela eya ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa igiya, ukulawula izinga kuzo zonke izigaba ukukhiqizwa sezishiye neragelo phambili kanye ukukhiqiza lolo esihle kakhulu ukudoba JIG futhi jigging. Ngo womshini ubuchwepheshe ekhethekile asetshenziselwa ukudla okuhlukahlukene, okuyinto labanika ukuphila isikhathi eside. Ngo womshini spinners ligxile yokukhiqiza gear ukudoba ebusika noma JIG wiring.
Baubles "Isidlo sasekuseni indawo", izici zayo
Inkampani US producer zonke zonyaka izicupho jikelele, ezisukela 2.5 kuya 12 cm ubukhulu, nesisindo - kusuka 3 kuya ku-100, isisekelo ukudalwa wakhonza vertikalka yayo Swedish eyaziwa iminyaka engaphezu kuka-200 edlule. tselnosplavnaya zethusi isetshenziswa womshini lolo. Ingaphezulu wesipina induna Swedish, perforated noma bushelelezi, izinga okusezingeni eliphezulu nokwelashwa kukagesi, zaveza futhi camera nge zokuzivikela ukuvenisha ungqimba. Tees Mustad inkampani Norwegian eyaziwa zenziwa high wire eqinile futhi obukhulu. Khona kanye ukubukeka kwawo ungathi lolo side, ngokushelela engonxantathu nge umugqa ecacile ephepheni. Futhi umuntu eqhathanisa ngayo banana.
Ukwenza spinners "Isidlo sasekuseni indawo" Kwenziwa phezu izitshalo Bay de Noc e-US. On the isembozo yasekuqaleni liyadingeka ukwethula inkomba ezweni enza. Ukudla okuhlukahlukene tihlelwe emaphaketheni ekhethekile (ibhamuza) kusukela Foam substrate. Iphakheji ne lolo, tee owufanelekela, kufakwe hook olulodwa, indandatho kanye amacembe anemibala ehlukene. Bengena ezingosini zayo linamalebuli ingcina: phosphorus kanye Fluorescent. Ababulawa ngo metal spinners oyohlala isikhathi eside.
Ngo induna, kanye ngezinye igiya eliphezulu, elinegazi eziningi. Uma ukuthenga kufanele niqaphele kakhulu.
bengena ezingosini zayo
Kodobo olusetshenziswa bedoba emanzini angajulile futhi ekujuleni ezinkulu. Ideal for Angling emifuleni ogeleza egcwele amanzi avaliwe (ukudoba phansi).
Ukusebenzisa lolo okokuqala, kubalulekile ukuba ulungise ubude line ukudoba (Lure akufanele be closer than 200 mm phansi kwesigubhu). bite Okuhle etholwe ukwanda abukhali.
Ukuze ukuzingela okuhle kufanele uzilungiselele ngokucophelela. inhlanzi ezahlukene abalumayo bengena ezingosini zayo "Isidlo sasekuseni indawo." On perch lolo akhethiwe 5-10 cm eside futhi 8-18 isisindo Pike kwaba isisindo akukhetha imayelana 30 g futhi ubude 5 kuya ku-8 cm. Lesi sangoma perch obujwayelekile ngempela ukuluma lolo enesisindo 8 g, 3 cm noma ngaphezulu. Ukuze salmon Angling lolo isisindo - 20 g, ubude -. Hhayi ezingaphezu kuka 9 cm Blesna ebusika Swedish induna njengelinye lamazwe kangcono Angling phezu iphezulu.
Spinner nge izilinganiso ezimbili, ezintathu futhi ezine ngaphezu kwalokho enikeziwe ngezingwegwe ekhethekile Bait worm. Lokhu kuyadingeka ezimweni lapho izinhlanzi okuhlabayo kuyinto yekwentiwa kanye ucobekile. Ukuze ukudla okuhlukahlukene ezifana osayizi amamitha amathathu ukujula efanelekayo. Futhi ingasetshenziswa usayizi nanhlanu namakhulu ayisithupha, uma ukujula - amamitha angaphezu kwamathathu. Ziyakwazi ekahle perch ezinkulu noma walleye. Ngaphezu kwalokho, spinners anemisila tee okuqinile esikhundleni hook ejwayelekile.
Izinombolo sesikhombisa, sesishiyagalombili anesithoba esetshenziswa Anglers oluphrofeshinali ukubamba izinhlanzi enkulu edla inyama zilwane. Lezi amakamelo Site amamitha angu amahlanu ukujula.
I jigging "Isidlo sasekuseni indawo" (Lure) iqoqa kahle nenhlanzi. Uma usebenzisa imikhiqizo kusukela 4 th 8 th udaba, kungenzeka ngaphandle kwezinkinga ukudoba izingqimba kwesigubhu kusuka ngamamitha 3 kuya 13, isibonelo, kule iVolga umcengezi. Summer amanzi evulekile "Isidlo sasekuseni indawo" ukusebenza kangcono kunokuba brand adumile xaxa. Encwadini ejwayelekile isicelo JIG wiring nokukhethwa kwekholomu amanzi, lapho ukhezo, kungenzeka ngaphandle kwezinkinga ezifana ekubambeni izilwane ezidla ezinye njengoba ebusika. ASP kuphela enezele kuyo. Lapho induna sheresper kweso ehlasela wesipina. Uma ukudoba endaweni lapho eziningi snags, lolo kungenziwa ifakwe i hook offset ne ukwengeza zenjoloba.
Amaqhinga ngokudoba ehlobo
Ekuqaleni kwalo wenza nokujikijela kusayithi chibi nge ukujula kancane. ukunyakaza Eminye bushelelezi wenziwa ematfuba eziningana ikhoyili, bese ukwenza ukunyakaza kungazelelwe uphinde - egeleza. Khona-ke kukhona sekhefu elifushane, nenduku Kwenziwa ukunyakaza eziningana oscillatory, futhi aphinde ngokucijile esondweni isibambo ivuliwe. In the ukungabikho imiphumela wafunda izingxenye ezijulile kwesigubhu kanye nenombolo ye ohambelana kuyakhethwa spinners.
Ukudoba kusukela ice
abadobi Podledniki wenze okwengeziwe hook Imibhobho esemzimbeni olukhethekile worm, iso noma perch gazinga. Njalo umdobi inezidingo, inqubo yayo ekhethekile yokudoba kwi "Isidlo sasekuseni indawo" ukuthi akasoze ashiye ngaphandle nibambe. Ukuze ezinhle catch ebusika JIG ebusika ifakwe tee esasinenjini, noma sebenzisa izinhlobo ezahlukene Imibhobho esemzimbeni (zemvelo kanye yokufakelwa) ukuze hook unary. Etulu naphasi motion oscillation amplitude mayelana 50 cm kudalwa amazombe umdlalo lolo "induna Swedish". Phakathi ummango kanye Uzalo lolo eniyenzayo ngezikhawu kunalokho iDemo. Kukhona ukhonkolo kanye izitobhi eside. "Svedish Pimpl 'eyikho lolo ukudoba kahle futhi zomile ebusika pervoledya.
Amapharamitha ukuthi kufanele unake okukhethekile lapho ekhetha igiya "Isidlo sasekuseni indawo" (Lure):
isisindo - kusuka 3 kuya ku-30 g ezincane usayizi spinners - inhlanzi encane inyamazane. Okukhulu - I-indondo inhlanzi;
usayizi noma ubude. Kukhethwe kuye ngokuthi uhlobo olunjani zezinhlanzi ukuba zibanjwe. ezibanzi: kusukela 2.2 kuya 12 cm;
umbala amacembe, okuyinto inamathelisiwe, ephelele lolo: obomvu iyatholakala futhi ephuzi. Umbala Red ziyojabula Anglers sezulu liguqubele futhi udangele, futhi uma libalele, umbala ophuzi kuzoletha kokubamba izinhlanzi eziningi. Engeziwe enamathela ekhethekile (holography) enamathiselwe lolo ukumelana;
izingwegwe onobuhle yokuqala ukuma okulungile futhi kahle ngensimbi.
Baubles "Isidlo sasekuseni indawo": Izibuyekezo
"Svedish Pimpl" (noma njengoba futhi waziwa ngokuba catchability yayo ezehlukile, isimangaliso Lure) has Izibuyekezo emihle kuphela:
Lure jikelele asezingeni elifanele;
emelelwa osayizi eziningana;
kungase kutholakale kahle kokubili ehlobo nasebusika;
kakhulu catchability lolo;
ephambanisa igama spinners, izinga - ezingeni eliphezulu;
nokuyenga ephumelela kunazo nomzingeli;
zibiza akuyona phasi;
Baubles ethandwa phakathi abadobi amateur nezobuchwepheshe;
Kungaba ukufaniswa yezimo yokudoba okuhlukile.
zibeke Incredible futhi bakuchazayo abathandi nabaculi ukudoba ebusika.
Baubles ukusebenza kahle
ngesivinini JIG wiring;
lapho Angling nendawo evulekile;
lapho obukhulu ice ikhava;
Lona Lure catchability eyenzelwe ukuzingela professional izinhlanzi ezinkulu ezizingelayo. Okwamanje, le ukudoba ngenela is kuyanda. Uma une ezahlukene ukudla okuhlukahlukene obujwayelekile ngokuqinile Bay de Noc, ukudoba kuzothatha eziningi ukuzijabulisa, rush adrenaline futhi sazise catch kakhulu.
Catching ku polystyrene: ikakhulukazi ukudoba, imishini, izimfihlo kanye namathiphu
Catching carp ku induku iflothi lemininingwane
Bait for Pike ekwindla: okuyinto engcono? On yini lolo engcono ngabadobi Pike ekwindla?
PRN format: wena uvule la mafayela?
Inkampani yezindiza "Nordavia": ukubuyekezwa, amasevisi kanye izitayela
Amazwibela we "ngokomzimba Ezifundweni eqenjini abaphezulu." Abstract isihloko amakilasi ezemidlalo eqenjini amadala. Amazwibela encwadi ethi non-bendabuko ngokomzimba Ezifundweni eqenjini amadala
ISivumelwano plussa: isimo nokubaluleka
Amavithamini for namakati: bikho futhi babutha
Ungenantambo Stapler Sibutsetelo izinhlobo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Umnsalo Brilliant tie izandla zabo
Uma inzalo ikati - umnikazi uyazikhethela
Ngezindlela ezahlukene ukufakazela Theorem Pythagorean: Izibonelo, incazelo kanye nokubuyekeza
Buyekeza entsha UAZ Hunter